वाल विवाह न्युनिकरण एक्लो प्रयासले हुदैन — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » अन्तर्वार्ता → वाल विवाह न्युनिकरण एक्लो प्रयासले हुदैन
October 9, 2016११६४ पटक
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, प्यूठानको महिला विकास अधिकृत शान्ति विश्वकर्मा सँग जिल्लामा रहेका बालबालिकाहरुको अवस्थाको बिषयमा बोम बहादुर परियारले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी :
१) स्वागत छ उज्यालो लाल्टिनमा यहाँलाई
२) जिल्लामा रहेका बालवालिकाको अवस्थालाई कसरी नियाली रहनुभएको छ ?
– हामी प्रत्यक्ष रुपमा बालवालिकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय भएकाले हामीले जिल्लामा रहेका बालवालिकाहरुका सवालहरु ,समस्या र आबश्यकताहरुलाई नजिकबाट नियाली रहेका छौं। र त्यहि अनुरुप हामीले भएका सवालहरु के छन्, त्यहि अनुसार हामीले आफ्ना कामहरुलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छौं।
३) बर्खरै रणनैतिक योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्पन्न गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा के समिक्षा भयो ?
– हामीले रणनैतिक योजना तर्जुमाका लागि तयारी भर्खरै पहिलो चरण पार गर्यौं। हामीले दुई दिनको एउटा गोष्ठि राखेका थियौं। त्यसमा छलफल अनि समुह कार्य गर्यौं । र छलफल सकेपछि ड्राफ्ट बनाउदै छौं। डा«फ्ट सकेपछि सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई राखेर त्यो प्रस्तुत गछौं। त्यहाँबाट पनि सुझाव संकलन गरेर ड्राफ्टलाई अन्तिम रुप दिनेछौं। हामीले गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठिमा हामीलाई अहिले बालविबाह बिरुद्धको एउटा ,राष्ट्रिय रणनिति २०७२ भैसकेको अवस्थामा त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रो जिल्लामा रहेको प्रमुख सामाजिक समस्या बालविवाह रहेको छ। त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि हामी आगामी दिनहरुमा के कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं। हाम्रो कार्यदिशा कस्तो हुनेछ।र हामी सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको भूमिका कस्तो रहनेछ ,कस्ले कस्तो प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने भनेर हामी सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई राखेर छलफल गर्यौं र त्यसबाट हामीले कति बर्ष पछि बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सक्छौं भनेर छलफल गरेका थियौं।
४) सन् २०२० सम्ममा जिल्लालाई बालमैत्री घोषणा सम्भव छ ?
– प्रयास गर्यो भने असफल भन्ने त केहि हुँदैन। सम्भव छ। यदि हामी सवै जना जति पनि सरोकारवालाहरु छौं। सबै आ–आफ्नो क्षेत्र र स्थानबाट आफ्नो भूमिका कृयाशिल भएर निर्वाह गर्यौं भने सम्भव नहुने त कुरै भएन।
५) प्यूठान जिल्लामा बालविबाहको दर अलि उच्च देखिन्छ ,कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले ?
– बिशेष गरि नेपालको सन्दर्भमा मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा बालविबाहको संख्या अलि बढि नै देखिन्छ। खास गरि पहाडी जिल्ला जहाँ दलित ,जनजातिहरुको बस्ती अलि बढी छ । त्यसै गरि प्यूठान जिल्लाको अवस्था त्यहि हो यो पनि पहाडी जिल्ला पर्यो। अलिकति सचेतनाको कम पनि देखिन्छ। जसका कारण बालविबाहको दर अलि बढी रहेको हुन सक्छ र साथसाथै बालविबाहका अन्य विभिन्न कारणहरु पनि छन्। यो नै एउटा कारण हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौं। प्युठान जिल्लाको बालविवाहको दर अलि बढि नै हुनुको कारण चाहि शिक्षा,गरिबि,प्रेम विवाह चाहि मुख्य कारण रहेको छ तेस्तै विद्यालय छाडेका र विद्यालय नगएका हरुले बढि बाल विवाह गरेको पाईन्छ । अहिलेको सन्र्दभमा मागि विवाह भन्दा भागि (प्रेम) विवाह गर्नेहरुले वाल विवाह बढि गरेको पाईन्छ । विभिन्न किसिमका प्रविधिहरुको विकास भए सँगसँगै त्यसको दुरुपयोग गर्नाले पनि यस्ता घटनाहरु घटिरहेका छन् र अझ त्यसमा पनि घरपरिवारबाट राम्रो मायाँ ममता नपाएका ,अभिभावक गुमाएका , सहि मार्गदर्शन नपाएकाहरुले बढि वाल विवाह गरेका छन् । निश्चित यहि नै वाल विवाहको कारण हो भन्न सकिने अवस्था छैन यसका विभिन्न कारण हरु छन् ।
६) अशिक्षा र गरिविलाई वाल विवाहको मुख्य कारण मानिरहदा के हामिले लिएको बाल विवाह विरुद्धको अभियान सन् २०२० सम्म सम्पन्न होला त ? कत्तिको सम्भव छ ?
– गरेपछि सवै सम्भव हुन्छ ,सब भन्दा पहिले हामिले काम गर्नु पर्छ र त्यसलाई सम्भव गराउनु पर्छ । हामि क्रियाशिल भएर सक्रियताका साथ लाग्यौ भने सबै सम्भव हुन्छ ।असम्भव भन्ने केहि हुदैन वाल विवाह न्युनिकरण पनि एउटा मात्र कार्यालयले सक्रियता देखाएर सफल हुन सकिदैन यो मल्टिसेक्टरल एप्रोचमा भर पर्ने कुरा हो । हामिले गरिवि ,अशिक्षा, न्युनिकरण सँगसँगै बाल विवाह पनि न्युनिकरण हुन्छ भनेका छौ गरिवि निवारणका लागि जिल्लामा रहेका सम्पुर्ण सम्बन्धित निकायहरुले पनि सक्रियताका साथ त्यहि अनुरुप अगाडि बढ्नु भयो भने र हामिहरु पनि अशिक्षा बाट बहिर ल्याउनको लागि सचेतनाको पाटोमा अगाडि बढिरहेका छौ सचेतना बृद्धिका लगि बिभिन्न कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौ ,अभियान चलाएका छौ । प्रचार प्रसार पनि गरेका छौ र जनचेतनामुलक कार्यक्रम पनि सन्चालन गरिरहेका छौ यसरी नै हामि सबैतिरबाट सक्रियताका साथ लाग्यौ भने योय अवश्य सम्भव छ र सफल पनि भईन्छ ।
७) तपाई महिला तथा बालबालिका कार्यालयको प्रमुख भएको नाताले बाल विवाहको क्षेत्रमा अहिले सम्म भएको काम र आगामि योजनाका बारेमा केहि बताईदिनु होस् न ?
– बिशेष त हामिले बालबालिकाको लागि निरोधात्मक कार्य पनि गरिरहेका छौ र उपचारात्मक कार्यहरु पनि गरिरहका छौ । निरोधात्मक कार्यहरुमा वाल विवाह हुन नदिनका लागि भनेर सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौ । अभियान चलाएका छौ ,गत साल २०७२ मंसिरमा चार ओटा गा.वि.स. हरुलाई केन्द्रित गरेर एक महिने बाल विवाह सम्बन्धि अभियान चलायौ ।त्यो पनि हामिले मात्र होईन स्थानिय निकाय,विभिन्न संघ सस्था ,क्वलहरु सँग मिलेर आफ्नो गा.वि.स. मा अभियान संचालन गरेका पनि उदाहरण छन् त्यसै गरी हामिले वाल विवाह हुन नदिनको लागि यो काम ग¥यौ जस्तैःविद्यालय स्थरका कार्यक्रमहरु ,सचेतना मुलक कार्यक्रमहरु पनि धेरै मात्रामा भईरहेका छन् ,प्रचार प्रसार सम्बन्धि काम विभिन्न मिडियाहरुको सपोर्टमा भइरहेको छ । भइसकेका वालविवाह तथा हुन थालेका वालविवाह पनि प्रहरीको सयोगमा प्रशासनका सयोगमा भइरहेको छ । त्यस्तै गरी हुनलागेका वालविवाह हामिलाई रिपोटिङ हुनासाथ हामिले प्रहपरिको सयोगमा ति वालविवाहरुलाई रोकेका र कुनै अवस्थामा प्रेम विवाह गरेकालााई अभिभावकको जिम्मा लगाएर उहाँहरुको पढांइलाई हौसला दिएको पनि अवस्था छ । यसै गरी हामिले ववल विवाहको अवस्था के छ त भनेर भर्खर मात्र २०७२ सालमा हामिले एउटा सर्वेक्षण पनि गर्यौ । जिल्ला वाल कल्याण समिती वाट यो पनि एउटा कार्य दिशा देखमउन त्यसले पनि सगाउछ । तथ्याङ्क पनि संकलन गरेको छ । सवै गाविस ,नगर पालिकाका वाडाहरुमा त्यसै गरेर रणनितिक योजना कार्यसाला गोष्ठी हामि अस्ती भर्खर गर्याै र अव हामिले जिल्लाको वालविवाह विरुद्ध को रणसनतिक योजना पनि वनाउने छौ । निकट भविश्यमा हामिले छिटै वनाएर राख्ने छौ । त्यति नै हो हामिले धेरै नै कार्य गरिराखेका छौ । वालविवाहको सन्दर्भमा भन्ने हो भने
८) आर्थिक अभावका कारण जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुमा महिला तथा वालवालवालिका मर्नुपर्ने स्थिति छ ,यो समस्या हट्छ कि हट्दैन् के लाग्छ तपाईलाई ?
– अव यो आर्थिक अभावका कारणले महिला, बालबालिकाहरु स्वास्थ्य उपचार पाएर वा नपाएर मर्नुभनेको दुःखत कुरा हो। दुःखत समस्या हो । यो हुन चाँही कसैलाई नपरोस् । अब स्वास्थ्य सम्बन्धि पनि बिभिन्न दिर्घकालिन रोगहरुको लगानी चाँही स्वास्थ्य निशुल्क रुपमा उपचार गर्ने ब्यवस्था सरकारले गरिरहेको छ। अन्य बालबालिकाको सन्दर्भमा के पनि गरिरहेका छौं भने जो बालबालिकाहरु आर्थिक विपतमा हुनुहुन्छ ,अभिभावक नभएका बालबालिकाहरु हुनुहुन्छ स्वास्थ्य उपचारको लागि उहाँहरुलाई पैसाको खाँचो छ भने त्यस्तो बालबालिकाहरुलाई हामी बालउद्धार कोषबाट पनि सहयोग गरिहेको अवस्था छ। र गरिरहेका पनि छौं। त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई त्यसै गरेर हस्पिटलबाट पनि मलाई लाग्छ निशुल्क रुपमा पनि उपचार हुन्छ। त्यस्ता बालबालिकाहरु जो विपन्न हुनुहुन्छ र रिफर गर्ने काम पनि हस्पिटलबाट हुन्छ। र हस्पिटलले रिफर गर्दा केहि रकम उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने काम पनि भैरहेको छ। र आगामी दिनहरुमा पनि नितिगत कुरामा नै अलिकति केहि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तै स्वास्थ्य निवारणको कुरा आईरहेका छन्। अहिले स्वास्थ्य निवारण कार्यालयबाट कार्य भयो भने पक्कै पनि त्यस्तो अवस्थाले पैसा नपाएकै कारणले गर्दा खेरी कोही मर्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। नितिगत रुपमा पनि यि कुराहरुलाई पनि अलि बढी सम्बोधन हुने हिसावले चाँही नितिहरु बनाउन आवश्यक छ। हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हौं र हामीलाई दिएको जिम्मेवारी तथा मार्गनिर्देशन अनुसार यो काम गरिरहेका छौं। बालउद्धार कोषबाट स्वास्थ्य उपचार गर्ने काम चै भैरहेको छ। त्यस्तै गरि महिलाहरुलाई लैगिंक हिंसा निवारण कोष ,एकल महिला सुरक्षा कोषबाट सहयोग गर्ने कार्य भैरहेको छ।
९) जिल्लामा बाल क्लवहरुबाट बालविबाह बढी हुने भयो भन्ने गुनासो छ नी यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– सबै बालक्लवहरुमा त्यस्तो घटना घट्यो भन्न हामीले मिल्दैन् एक दूई वटा बालक्लवहरुमा त्यस्ता घटना घटेको हामीले पनि सुनेका छौं। त्यो अपबादकै रुपमा होला । कस्तो हुन्छ भन्दा बालबालिकाको उमेर भनेको राम्रो डाइरेक्ट पाएनन् भने उनीहरुले जस्तो पनि कदम चाल्न सक्छन्। बालक्लवमा आवद्ध भएर उनीहरुले घरपरिवारबाट राम्रो गाइड पाएनन् भने अथवा टिचर वा साथीबाट राम्रो गाइड पाएनन् भने उनीहरुले यो कदम चाल्ने गरेको पाइन्छ। तर यसमा हामीले अझ सचेत भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। बालक्लवका भाईबहिनीहरुको अझ क्षमता विकास गर्ने काम उनीहरुलाई राम्रो सँग यस्ता कुराहरुको परार्मश कुराहरु चाँही हामी सामुदायिक स्तरका संयन्त्रहरुले ,हामी स्थानिय निकाय ,हामी जस्ता सरोकारवाला निकायहरुले यसमा अझै बढी सचेत भएर ति बालबालिकाहरुलाई अबका दिनमा त्यस्ता गतिबिधिलाई रोक्न क्रियाशिल भई अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।
१०) अन्त्यमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्छ के छ प्रगति विवरण ?
– हामीले अव प्यूठान जिल्लामा विशेष गरि बालबालिकाहरुको सवालहरु के के हुन् पहिचान गरि ,प्रुमुख सवालहरु मै काम गरिरहेको अबस्था छ। विशेष गरि बालविवाह प्रमुख सवालको रुपमा हामीले लिएका छौं। त्यसैलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि बिभिन्न अभियान संचालन गरिहेका छौं। तथ्यांक संकलन ,रणनैतिक योजना तयारी गर्ने काम गरिरहेका छौं। त्यसै गरि बालश्रमको समस्या पनि यो जिल्लामा रहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हामीले विभिन्न चरणमा अनुगमन निरिक्षण गरेर ब्यवसायहरुलाई यस्तो बाल श्रमिक राख्ने ब्यवसायीहरुलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने लगाएतका बिभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं। विपन्न ,अभिभावक बिहिन बालबालिकाहरुलाई ब्यवस्थापनका बिभिन्न संरक्षण गृहहरुमा रिफारिस गरेर पठाएका छौं। त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई बाल उद्धार कोषबाट सहयोग पनि गरिरहेको अबस्था छ। बालबालिकाहरुको विकासका लागि अर्थ पुर्ण सहभागिताका लागि हामीले बालकल्याण समितिबाट, महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट, हामीले उहाँहरुलाई सचेतना मुलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको अबस्था छ। यसरी नै हामीले नियमित गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु पनि गरिहेका छौं भने त्यसबाहेका अन्य आबश्यकता अनुसारका जिल्लामा भएका सवालहरुलाई मध्यनजर गर्दै हामी कार्यक्रमहरु अगाडि बढाई रहेका छौं।
११)समय दिनुभएकोमा धन्यबाद
– हजुरहरुलाई पनि धन्यबाद